युवा संघले दियो घरमै बसेर लाखौं कमाउने अवसर, बनाउनुहोस् ५ मिनेटको ‘सर्ट फिल्म’ युवा संघले दियो घरमै बसेर लाखौं कमाउने अवसर, बनाउनुहोस् ५ मिनेटको ‘सर्ट फिल्म’ Canada Nepal
काठमाडौं - चर्चित अभिनेता बिराज भट्ट घाइते भएका छन् । चलचित्रको एक्सन स्टन्टको क्रममा बिराज भट्टको बाँया खुट्टामा चोट लागेको छ ।
उनलाई भोजपुरी चलचित्र 'आक्रोश' को छायांकनको क्रममा चोट लागेको हो । खुट्टामा चोट लागेर रगत जमेकोले डाक्टरले दुई साता आराम गर्न भनेको बताइएको छ ।
सन्दिप सिंहले निर्देशन गरिरहेको यस चलचित्रको भारतको लखनउमा छायांकन भइरहेको थियो । बिराज घाइते भएपछि चलचित्रको छायाँकन पनि रोकिएको छ ।
चलचित्रको छायाँकल अहिलेसम्म ४० प्रतिशत सकिएको छ । यस चलचित्रमा विराजसँगै प्राची सिंह, सन्जय पाण्डे, मनोज टाइगर लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
श्रावण १२, २०७८ मंगलवार १२:२३:५७ बजे : प्रकाशित
# बिराज भट्ट
काठमाडौं - फिल्म ‘म त मर्छु कि क्या हो’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । हास्यकलाकार सिताराम कट्टेल 'धुर्मुस' र कुञ्जना घिमिरे 'सुन्तली' को मूख्य भूमिका रहेको यस फिल्मको ट्रेलर बुधबार युट्युबमा सार्वजनिक भएको हो ।
ट्रेलरमा धुर्मुस र सुन्तलीको बैबाहिक जीवनमा आउने उचाव-चढाव देखाइएको छ । धुर्मुस-सुन्तलीकै लेखन र निर्देशन रहेको यस फिल्ममा धुर्मुस र सुन्तलीसँगै बुद्धि तामाङ, विजय बराल, रवि गिरी, पल्पसा डंगोल, सुमन कार्की, सुमन कोइराला, बलदिप राई लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
फिल्म ओटीटी प्लेटफर्म ‘ओ हो मुभी’ मा रिलिज हुनेछ । यसअघि धुर्मुस-सुन्तली को फिल्म ‘सेन्टी भाइरस’ प्रदर्शन भएको थियो । यस फिल्मले दर्शकको निकै माया पाएको थियो ।
श्रावण १३, २०७८ बुधवार १८:३५:४८ बजे : प्रकाशित
१ वर्ष पनि टिकेन मिया खलिफाको वैवाहिक जीवन
काठमाडौं - लेबनानी मूलकी अमेरिकन पोर्न स्टार मिया खलिफा विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहने गर्छिन् । सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहेकी मिया का धेरै फ्यानहरु छन् ।
अक्टोबर २०१४ मा अश्लील चलचित्रमा अभिनय गरेपछि चर्चामा आएकी खलिफाको विवाह पनि लामो समय टिक्न सकेन । उनको विवाह भएको १ बर्षमै सम्बन्धविच्छेद भयो । उनले हालै पति रोकर्ट स्यान्डबर्गसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी हुन् ।
२०१९ मा इंगेजमेन्ट गरेका उनीहरुले हालै आफुहरुको सम्बन्ध बिग्रिएको घोषणा गरे । खलिफाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफुहरुको सम्बन्धविच्छेद भएको जानकारी गराएकी छिन् ।
उनले आफुहरुले सम्बन्धलाई सफल बनाउन सक्दो प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन नसकेको बताएकी छिन् । उनले लेखेकी छिन् - 'हामी आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्छौं कि हामीले हाम्रो विवाहलाई सफल बनाउन सक्दो प्रयास गर्यौं । एक वर्षको प्रयासपछि हामीले आफ्नो बाटो अलग बनाउँदैछौं । हामीले एक अर्कालाई माया र इज्जत गर्नेछौं । हामी यो च्याप्टरलाई कुनै पछुतोबिना बन्द गर्दैछौं ।'
श्रावण १४, २०७८ बिहिवार १४:२९:२० बजे : प्रकाशित
# मिया खलिफा
नेपाली अभिनेत्री उरुषा पाण्डेले पाइन् भारतमा ‘लेजेण्ड दादासाहेक फाल्के अवार्ड’
काठमाडौं - नेपाली मोडल तथा अभिनेत्री उरुषा पाण्डे भारतमा ‘लेजेण्ड दादासाहेक फाल्के अवार्ड’ बाट सम्मानित भएकी छिन् ।
भारतीय फिल्मका पिताको रुपमा चिनिने दादासाहेब फाल्केको नामबाट दिइने यस अवार्ड भारतकै उत्कृष्ट सम्मान मानिन्छ ।
उनलाई दादासाहेक फाल्केका नाती चन्द्रशेखर पुसाल्करले ‘लेजेण्ड दादासाहेक फाल्के अवार्ड’ बाट सम्मानित गरेका हुन् । आफु लेजेण्ड दादासाहेक फाल्के अवार्डबाट सम्मानित भएको बारे उरुषाले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएकी छिन् ।
उरुषाले पछिल्लो केही वर्षदेखि मुम्बईमा बसेर हिन्दी फिल्म, वेब सीरीज, विज्ञापन तथा म्युजिक भिडियोहरुमा अभिनय गरिरहेकी छिन् ।
श्रावण १४, २०७८ बिहिवार २१:१६:४४ बजे : प्रकाशित
# उरुषा पाण्डे
दी भ्वाइस अफ नेपालको अन्तिम ४ मा को को छानिए ? को को बाहिरिए ?
काठमाडौं - चर्चित रियालिटी सो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन–३ को शुक्रबार सेमी फाइनल सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको भ्वाइस अफको अन्तिम चारमा किरण गजमेर, आर्यन तामाङ, तारा श्रीस मगर र ज्वाला राई प्रबेश गरेका छन् ।
उनीहरु भोटका आधारमा छनोट भएका हुन् । तारा टीम राजुबाट हुन् भने ज्वाला टीम तृष्णाबाट हुन् । यस्तै किरण टीम प्रमोदबाट र आर्यन टीम दीपबाट हुन् ।
यस्तै भ्वाइस अफबाट ४ जना प्रतियोगी बाहिरिएका छन् । बाहिरिनेमा टीम दीपबाट गोविन पुन, टीम तृष्णाबाट अफ्रिता खड्गी, टीम प्रमोदबाट रवीन गहतराज र टीम राजुबाट सोनाम शेर्पा रहेका छन् ।
श्रावण १६, २०७८ शनिवार ११:००:१३ बजे : प्रकाशित
# दी भ्वाइस अफ नेपाल